​इटहरीमा अपांगता भएका बालबालिकाको उपचार र पुनर्स्थापना अस्पतालको भवन बन्दै
​इटहरीमा अपांगता भएका बालबालिकाको उपचार र पुनर्स्थापना अस्पतालको भवन बन्दै
इटहरी । इटहरीमा सुविधा सम्पन्न अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । विकलाङ्ग मित्र समुहद्वारा सञ्चालित अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्र्थापना केन्द्रको प्रदेश क्षेत्रिय कार्यलय २०६५ देखि इटहरीमा सञ्चालनमा आएको हो ।
गरिब तथा अपाङ्ग बाल बालिकाहरुलाई प्राथमिकताका साथ उपचार तथा पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले सन १९८५ मा यस सस्थाको स्थापना भएको थियो । केन्द्रीय कार्यलय काभ्रेको बनेपा रहेको यस संस्थाको साखा इटहरी, लहान, बुटवल र नेपालगञ्जमा रहेको छ ।
नागरिक समाज इटहरीका अध्यक्ष दिनेश रसाईलीको सक्रियतामा इटहरी वार्ड नं. १६ स्थित ८ कठ्ठा ३ धुर जग्गामा यस संस्थाको भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ । वि.सं. २०७३ साल पौषमा विकलाङ्ग मित्र समुहका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. अशोक कुमार बाँस्कोटाको नेत्रित्वमा भवन निर्माण समितिको गठन भएको थियो । यस संस्थाले भवन निर्माण सहयोगका लागी इटहरी उपमहानगरपालिकामा प्रस्ताव पेस गरेको छ । भवनको इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन पनि भइसकेको छ ।
केन्द्रको निर्माणपछि यस क्षेत्रका बालबालिकाहरुले सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्ने हुँदा भवन निर्माणका लागी सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ ।
पुनरस्र्थापना केन्द्र इटहरीले निस्शुल्क घुम्ति तथा शल्यक्रिया शिविरहरु संचालन, सहायक उपकरणको नाप, निर्माण र वितरण, गृह भेट तथा अनुगमन, अपाङ्गता व्यवस्थापन तथा न्युनीकरणको लागी जनचेतना मुलक कृयाकलापहरु तथा सरकारी तथा बिभिन्न सरोकारवाला निकायसंग समन्वय जस्ता कृयाकलापहरु सन्चालन गर्दछ ।
यस संस्थाले जन्मजात वा जन्म पछि खुट्टाको पैताला भित्र–बाहिर फर्केको, हात–खुट्टा भाँचिएर बाङ्गो भएको वा हड्डी नजोडिएको, जन्मजात वा चोटपटकबाट हिप ज्वाइन्ट खुस्किएको, शरिरमा राखिएको स्टिल, पाता वा रड झिक्ने, आगोले पोलेर अंगहरु एक– आपसमा टाँसिएको वा थप औंला भएको बालबालिकाको उपचार गर्ने रसाइलीले जानकारी दिए ।
केन्द्रले २०७५ सालको अन्त्य सम्ममा भवन निर्माण गरिसक्ने बताउदै अध्यक्ष रसाईलीले ३०० बालबालिकालाई इटहरीमै उपचारको व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए ।